नम्रता श्रेष्ठले बनाइन प्रियासनलाई ‘नोभेल किङ्ग’ - Dainik Nepal
नम्रता श्रेष्ठले बनाइन प्रियासनलाई ‘नोभेल किङ्ग’
दैनिक नेपाल २०७५ फागुन २६ गते १२:३७
काठमाडौँ । मानिसको जीवनमा विभिन्न आरोह अवरोह हुन्छ । कुनैकुनै व्यक्तिहरुका कारण उठ्नै नसक्ने गरेर सकिन्छ मान्छे ! कुसैले गर्दा रहर लाग्दो प्रगतिपथमा पुग्छ मान्छे ! कुनै मान्छेका कारण प्रगतिपथमा लम्कन सफल उपन्यासकारको नाम हो, सविन प्रियासन । यस वर्ष तीन वटा उपन्यास ब्रेकअप डायरी, लक्कीचार्म, सेल्फी निकालेर ह्याट्रिक गरेपछि उनलाई यतिबेला ‘नोभेल किङ्ग’का नामले समेत बोलाउन थालिएको छ ।
२०६० सालमा पहिलोपटक रोदनपछिको उपन्यास निकालेर साहित्यिक फाँटमा पाइला अगाडि बढाएका प्रियासनले त्यसपछि सपनाभित्रको सपना कथा संग्रह र भुमरी उपन्यास प्रकाशित गरे । दुईवर्षसम्म उनी साहित्यमा क्रियाशिल बने । तीनवटा पुस्तकहरु प्रकाशित गरेपछि उनको साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्नबिरामनै लाग्यो । त्यसपछि १० वर्षसम्म पत्रकारितामा क्रियाशिल बनेका प्रियासनले यस अवधिमा साहित्यको स पनि लेखेनन् । तर जब २०७१ सालमा उनको भेट नायीका नम्रता श्रेष्ठसँग दाङमा भयो, त्यसपछि उनको मनमा साहित्यका रागहरु उत्पन्न भए । एकप्रकारले भन्ने हो भने उनको साहित्यमा नायीका नम्रता श्रेष्ठका कारण पुनरागमन भयो ।
चलचित्र सम्बोधनको च्यारिटी सोका लागि दाङ आएकी नम्रतासँगको क्षणिक भेटका कारण मनमा लुकेका साहित्यीक डबलीहरु कथाकापात्र बन्न थालेपछि प्रियासनले नम्रताकै बारेमा उपन्यास लेख्ने योजना बनाए । जुन कुरा २०७१÷०७२ तिर भाइरल बन्यो । नायीका नम्रता श्रेष्ठको जीवनमा आधारित रहेर उपन्यास निकाल्नका लागि प्रियासनले नम्रताको बारेमा भरमजदुर अध्ययन गरेका थिए । उनको बारेमा लेखिएको पत्रपत्रिकाहरु, यूट्यूव, नम्रताका अन्तवार्ताहरु देखि उनले चिनेजानेका धेरैसँग सोधपुछ गरेर नम्रताको बारेमा जानकारी लिएको प्रियासनको भनाइँ छ । उपन्यास लेख्ने विषयमा नम्रतालाई सम्बोधन चलचित्रका निर्माताहरु मार्फत खबर पठाएको र त्यसपछि फोनबाट पनि यस विषयमा धेरैपटक नम्रतासँग छलफल गरेको बताउने प्रियासनले अध्ययनकै भरमा उपन्यासको पाण्डुलिपी तयार बनाए । पाण्डुलीपी तयार भएपछि नायीका नम्रता श्रेष्ठलाई काठमाडौंमा गएर उनको हातैमा दिएको प्रियासनको भनाइँ छ ।
प्रियासनले नम्रताको बारेमा लेखिएको उपन्यास अहिलेसम्म ननिकाले पनि त्यसपछि २०७३ जेठमा पुनरागमन उपन्यास निकालेर १० वर्षपछिको साहित्यिक रिक्ततालाई उनले मेट्ने काम गरे । त्यसपछि उनले पल्लवी, सहनशीला, सेल्फी, लक्कीचार्म र केही दिन अगाडी ब्रेकअप डायरी उपन्यास निकालेका छन् । प्रियासनले निकालेका सबै उपन्यासहरु पठनीय भएकाले बिक्री समेत अत्यधिक भएको छ ।
करिअरमा फिल्म क्षेत्र नरोजेकी पूर्व मिस नेपाल अश्मीको बलिउड गायकसँग प्रेम राग
‘रातो टीका निधारमा’मा साम्राज्ञी जोडिइन्
मोडलको उपद्रो : डन चरीसँग प्रेम, कटुवालसँग जालझेल, अहिले तीन महिना जेल !
लोकप्रिय गायक याम क्षेत्रीको हृदयविदारक गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)